Indlu yangaphambili yeCanal ene-seawall yokufikelela kwisikhephe
Le Lakeside Cottage yindawo yosapho efikelelekayo. ILakeside Cottage ikumgama nje weenyawo ezimbalwa ukusuka emanzini kumjelo weSawmill Lake. Uya kuba nokufikelela kwichibi ngalinye kwikhonkco lamachibi eBarbee Lake. Uya kuba nakho ukwenza iinkumbulo zobomi obude ngelixa ukonwabela ukuloba, ukukhwela isikhephe *, kunye neentsuku zokuphumla zamachibi.
*Iphenyane alibonelelwanga ngerenti. Iirenti zezikhephe ziyafumaneka kufutshane.
ILakeside Cottage ikumgama nje weenyawo ezimbalwa ukusuka emanzini kumjelo weSawmill Lake. Uya konwatyiswa yimbonakalo entle esecaleni kwechibi. Kumgangatho ophambili uya kufumana amagumbi amabini okulala- enye enebhedi enkulu ye-Queen kunye nelinye elinamawele ngaphezulu kwebhedi egcweleyo. Igumbi lokuhlambela likwabekwe kumgangatho ophambili. Ikhitshi elivulekileyo ligcwele ngokupheleleyo kwaye libandakanya ifriji entsha, kunye nesitovu, imicrowave, iimbiza neepani, umenzi wekofu, kunye netafile kunye nezihlalo ezine. Kukho iindawo ezimbini ezongezelelweyo zokutya kwi-counter counter top.
Uya kuba neendawo ezininzi zokuhlala ngelixa undwendwela usapho kunye nabahlobo kwibhedi entsha kunye nesihlalo sothando esibekwe kwigumbi lokuhlala eliphambili. Izitulo zeAdirondack zikwiveranda engasemva ukuze ukonwabele ixesha ngaphandle, ngokunjalo.
Ngaphandle kweveranda engasemva uya kufumana indawo yokuhlala yesibini ebekwe phantsi kwegumbi eliphezulu elinebhedi yesibini ye-Queen ukuze kuhlaliswe amaqela amakhulu. Uya kuyonwabela imbonakalo entle yechibi ukusuka kwindawo ephezulu!
4.88 ·Izimvo eziyi-42